Tips for first impression – Live the Dream
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပထမဆုံး တွေ့တဲ့အခါ ဘာကိုအရင်ကြည့်မိလဲ အပြောအဆိုလား၊ အမူအရာလား၊ ဝတ်ပုံစားပုံလား။ ကိုယ့်ရဲ့ first impression ဆိုတာက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် တကယ်တမ်း လူတော်တော်များများက ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့တင် ကိုယ်ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာကို ရာနှုန်းအနည်းနဲ့ အများတော့ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။
သင်ကော လူတွေသင်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးပေးကြလဲ??? ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမယ် ထင်လဲ??? ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ first impression ကလုံးဝမိုက်နေစေဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
စကားပြောတဲ့အခါ ပွင့်လင်းမှုရှိတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့သူဆို စကားပြောရတာ အဆင်ပြေတယ် ခင်မင်ဖို့လည်း ပိုလွယ်တယ် ပြောရတာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်တော့ လူအများစုက ပိုသဘောကျတယ်။ ပြောချင်သလို မပြောချင်သလို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆရာကြီးအထာလိုလိုဆို ကိုယ့်စိတ်ထဲကနေ သူကဘာကြီးလားပေါ့ မာနကလည်း ကြီးလိုက်တာဆိုတာမျိုး တန်းတွေးမိရောပဲ။ ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းပါဆိုတာက ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ ပေါတောနေဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးသာ ပြောဖို့လိုတာပါ။
Self-confidence ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာတော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ကတော့ နေရာတကာ မပါမဖြစ်ပါပဲ။ First impression အတွက်ကလည်း ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုအပ်လာပြန်ပါပြီ။ သင်ကော မပွင့်တပွင့် မဝံ့မရဲဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့မျိုးဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့ ပိုစကားပြောချင်လဲ။ ကြောက်နေသလိုလို မရဲသလိုလိုနဲ့ ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ ပုံမျိုးဆိုရင် တော်တော်များများ စကားပြောချင်စိတ်တောင် မရှိကြတော့ပါဘူး။ အဲ့တော့ ဘာမှကြောက်မနေပါနဲ့ လူတွေနဲ့ စကားပြောရမှာပါ သရဲတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်ချက်ရှိနေပါစေ။
၃. Eye Contact
ဒီအချက်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ ဒါပေမယ့် သိကြပေမယ့် တကယ်တမ်း မလုပ်မိကြတာ များပါတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါ eye contact လုပ်ပေးရင် ပြောတဲ့သူကို လေးစားကျသလို ကိုယ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာ ပြရာလည်းကျပါတယ်။ ပြောရရင် ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးပါပဲ မျက်လုံးချင်း ဆုံမှာကို ဘာမှကြောက်မနေပါနဲ့ ကိုယ်က အပြစ်လုပ်ထားတာမှ မဟုတ်တာ။
“အပြုံးချိုချိုက ရောဂါတစ်ဝက်သက်သာစေတယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားတောင် ရှိသေးတာပဲမို့လား။ ဒီလောက်ဆို အပြုံးက ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်လဲဆိုတာ သိရောပေါ့။ စကားပြောနေတုန်း မျက်နှာကြီး စူပုပ်နေရင် “ဒီတစ်ယောက်ကလည်း မျက်နှာကြီးက ပုပ်သိုးနေတာပဲ စိတ်ပျက်စရာကြီး” ဆိုတာမျိုး တွေးမိသွားနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်အကြောင်းမှ သူမသိတာလေ။ ဆိုတော့ တခြားသူနဲ့ စကားပြောနေရင် အထိုက်သင့်လေး တတ်နိုင်သလောက် ပြုံးပေးပါ။ ဒါကကိုယ့်အပေါ် အမြင်ကိုလည်း အများကြီး ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ်စကားပြောနေတုန်း နားမထောင်ပဲ တခြားကို အာရုံစိုက်နေရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ ဒေါသထွက်သွားတယ်မို့လား။ ဟုတ်ပါတယ် လူတိုင်းက ကိုယ်စကားပြောနေရင် သေချာအာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ပေးတာကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်စကားကို အာရုံမစိုက်တာ မကြိုက်ဘူးမို့လား ကိုယ်မကြိုက်တာကို သူများအပေါ်လည်း မလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ပြောတာကို သေချာအာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ပေးပါ။
စတွေ့တည်းက ကိုယ်ကအဆိုးဘက်နဲ့ လိုက်ငြင်းနေရင် ဘယ်သူမှ သဘောမကျပါဘူး စိတ်ထဲလည်း ချဉ်သွားတတ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်လေး ထားပါ။ တဖက်လူပြောနေတာကို အကောင်းဘက်ကနေ တွေးပေးဖို့ ကြိုးစားပါ။ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်လေးထားရင် ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာတယ် ပြောတဲ့သူလည်း စိတ်ချမ်းသာတယ် ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်း အဆင်ပြေတယ်လေ။ ပြီးတော့ တစ်ခုရှိသေးတာက တဖက်လူပြောတာကို အကောင်းဘက်ကနေ တုံ့ပြန်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်နော်။